२६% नाफा बढे पनि लक्ष्मी बैंकको इपीएसमा किन गयो पहिरो ?
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १७ करोड ९ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अविधमा बैंकको नाफा १३ करोड ५४ लाख नाफा कमाएको थियो । खूद नाफातर्फ सन्तोषजनक बढोत्तरी भए पनि बढेको पूँजी अनुसार व्यवसाय बिस्तार गरी नाफा कमाउन नसक्दा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी भनेर घटेर चौपट भएको छ...
लक्ष्मी बैंकले १०% बोनस दिने, गत वर्ष भन्दा कम
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको गत कात्तिक १ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३ ७४ को खूद नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । यो प्रस्ताव नेपाल...
ताप्लेजुङ्गमा लक्ष्मी बैंकको नयाँशाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले बिहीबारदेखि ताप्लेजुङ्गको फुङ्लिङ्गमा आफ्नो नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएकोे छ । जिल्लामा बैँकको यो पहिलो शाखा हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ पुँजीविकास कोष तथा लक्ष्मी बैंकबाट संयुक्त रुपमा सञ्चालित “उन्नति–बित्तमा पहँुच” परियोजनाअन्तर्गत पूर्वाञ्चलका ९ जिल्लाका ग्रामीण समुदायमा वित्तीय पहुँच...
सिन्धुलीमा लक्ष्मी बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्ने क्रममा सोमबार सिन्धुलीको, १ नं बजार, कमलामाईमा आफ्नो नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएकोे छ । यस जिल्लामा बैंकको यो नै पहिलो शाखा हो । अब लक्ष्मी बैंकको शाखा सञ्जाल ६९, ३ हस्पिटल सेवा काउन्टर, ९० एटिएम, २५०० भन्दा बढी रेमिटेन्स् अनि ४०० भन्दा बढी मोबाईल एजेन्टहरु पुुगेका छन् । यी...
रुपन्देहीको मणिग्राममा लक्ष्मी बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आइतबार रुपन्देहीको मणिग्राममा आफ्नो नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । भैरहवा र बुटवल पश्चात बैंकको यस क्षेत्रमा यो तेस्रो शाखा हुनेछ । मणिग्राम शाखा, जोगीकुटिबाट स्थानान्तरण भएको हो र जोगीकुटिमा कारोबार गर्ने सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई सबै सेवा, बुटवल शाखाबाट उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । अब लक्ष्मी बैंकको...
प्रतिसेयर आम्दानीमा हुँदैछ छलछाम, माछापुच्छ्रेपछि लक्ष्मीले झुक्यायो
काठमाण्डौ । सेयर लगानीकर्ताहरुलाई कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्न लोभ्याउने एउटा तत्व हो प्रतिसेयर आम्दानी । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को चौथो त्रैमासिक बित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा सोझा लगानीकर्तालाई झुक्याउने नियतले ठूला बैंकहरुले प्रतिसेयर आम्दानी नै गलत प्रकाशित गर्ने गरेका भेटिएको छ । आइतबार माछापुच्छ्रे बैंकमाथि प्रति...
सल्यानको सल्लीबजारमा लक्ष्मी बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आइतबार सल्यानको सल्लीबजारमा आफ्नो नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएकोे छ । बैंकको यस क्षेत्रमा, श्रीनगर पश्चात् यो दोस्रो शाखा हुनेछ । यस अनुसार, लक्ष्मी बैंकको शाखा सञ्जाल अब ६९, ३ हस्पिटल सेवा काउन्टर, ८७ ए टि एम, २५०० भन्दा बढी रेमिटेन्स् अनि ४०० भन्दा बढी मोबाईल एजेन्टहरु पुुगेका छन् । यी शाखाहरुकासाथ लक्ष्मी...
एभरेष्ट बैंकसँग मर्जरमा जान लागेको बैंकको सेयर सस्तोमै उठाउने अवसर
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंकसँग मर्जरको भगिरथ प्रयासमा रहेको लक्ष्मी बैंकले बिक्री नभएको ३ लाख ९४ हजार ९ सय ३९ कित्ता सेयर बोलकबोलबाट बिक्रीका लागि आवेदन खुलाएको छ । लक्ष्मी बैंकले बिक्री नभएको सेयरका लागि लिलामी प्रक्रिया आगामी असार १६ गते अर्थात शुक्रबारबाट सुरु गरेको हो । यो बैंकले बैशाख ३ गतेदेखि १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर...
लक्ष्मीको बोनस लिलामीबाट कायम सेयरधनीले पनि पाउने
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने तयारीमा रहेको भनिएको लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ३८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । यो बैंकको मंगलबार सम्पन्न १६ औं वार्षिक साधारणसभाले २०७३ असार मसान्तसम्म कायम सेयर पूँजीको ३८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको हो । सो...
एभरेष्ट बैंकसँग मर्जरमा जान लागेको बैंकको सेयर बोलकबोलबाट उठाउने अवसर
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंकसँग मर्जरको भगिरथ प्रयासमा रहेको लक्ष्मी बैंकले बिक्री नभएको ३ लाख ९४ हजार ९ सय ३९ कित्ता सेयर बोलकबोलबाट बिक्री गर्ने भएको छ । लक्ष्मी बैंकले बिक्री नभएको सेयरका लागि लिलामी प्रक्रिया आगामी असार १६ गतेबाट सुरु गर्ने भएको हो । यो बैंकले बैशाख ३ गतेदेखि १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको थियो ।...
प्रोफेसनल दियालोलाई गाभेपछि लक्ष्मी बैंकको यस्तो देखियो प्रगति
काठमाण्डौ । प्रोफेसनल दियालो विकास बैंकलाई गाभेको लक्ष्मी बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म ५६ करोड ९१ लख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बिहीबार प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ४४ करोडको हाराहारीमा खुद नाफा आर्जन भएको थियो । यो अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्षको तेश्रो...
लक्ष्मी बैंकको अरेन्ज खाता, उच्च ब्याज
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले अरेन्ज बचत खातालाई केही नयाँ सेवा सुविधासहित वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ग्राहक समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । जुन बजारमा कायम ब्याजदरहरुमा अधिकतममध्ये हो । यस बचतका खाताका ग्राहकहरुले रु ५ लाखको न्युनतम मौज्दात कायम राखी कुनै थप सेवाशुल्कबिना नै रु १० लाख बराबरको बिमा सुविधा र अन्य बैंकिङ्ग सुविधामा छुट पाउने...
लक्ष्मी बैंकको डबल अफर : सतप्रतिशत हकप्रद भरेकाले पनि बोनस पाउने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले बैशाख ३(आज)देखि सतप्रतिशत हकप्रद निश्कासन गरेको छ । यो बैंकको हालको चुक्तापुँजीको १०० प्रतिशतको दरले हकप्रद निश्कासन भएको हो । बैंकले १ सय रुपैयाँ अंकित मुल्यको कुल ३ करोड १५ लाख ९० हजार ३ सय ३ कित्ता हकप्रदन निश्कासन गरेको हो । यो बैंकको सतप्रतिशत हकप्रदका लागि चैत १८ गतेलाई बुक क्लोजको मिति...
१५ वर्षमा लक्ष्मी बैंकले के गर्यो ? यस्ता छन् प्रगति
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले सञ्चालनको १५ वर्ष पूरा गरेको छ । सन् २००२ मा वीरगञ्जबाट क्षेत्रीय बैंकको रुपमा स्थापित भई सन् २००५ मा राष्ट्रिय स्तरको बैंकको रुपमा स्तरोन्नति भएको लक्ष्मी बैंकले हाल ३६ जिल्लाका ६८ शाखा तथा ८० भन्दा बढी एटिएम, इन्टरनेट तथा मोबाइल बैंकिङलगायत आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट ठूला पूर्वाधार आयोजना तथा स�...
लक्ष्मी बैंकको डबल अफर : बैशाख ३ देखि हकप्रद भर्नेलाई समेत बोनस
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले आगामी बैशाख ३ गतेदेखि १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने भएको छ । यो बैंकले चुक्तापूँजी वृद्धिको उद्देश्यले आफ्ना सेयरधनीका लागि सतप्रतिशत हकप्रद निश्कासन गर्न लागेको हो । बैशाख ३ गतेदेखि निश्कासन हुने हकप्रदमा जेठ ७ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । यो बैंकले १ सय रुपैयाँ अंकित...